Ingabe Isayithi Lakho Lithi "Gcina Ngaphandle"? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 26, 2010 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Lapho ngisebenza nabanye ochwepheshe be-SEO, bacindezela amavolumu aphezulu kakhulu okusesha noma amagama ancintisana kakhulu. Lapho ngisebenza nabezindaba bendabuko, bahlala bephusha amabhola wamehlo futhi bafinyelele. Lapho ngisebenza nabafana bezokuxhumana, bahlala njalo belinganisa abalandeli nabalandeli. Lapho ngisebenza nabaqambi, bafuna ukuklama izinqumo ezincane kakhulu.
Ukumaketha akumayelana nokuhlonza inani eliphansi kunawo wonke ukukhulisa amandla okufinyelela noma okusatshalaliswa. Njengomakethi, kwesinye isikhathi umkhankaso ungaba ukukhomba insiza eyodwa noma umthelela ukuze kukhulunywe kahle. Kususelwa egunyeni labo, ukufika ngesikhathi komkhankaso, kanye nezithameli esiqonde ukufinyelela kuzo. Kwesinye isikhathi lokho akuyona idinominetha nhlobo - kuyithagethi ebekiwe, ebekwe kahle futhi egxile kunhloso ethile.
Amasayithi wami wephula imithetho eminingi. Othile waveza ukuthi, yize ngicindezela amaklayenti ami ukuthi aklame amasayithi anamafonti aphezulu ahlukile ngasemuva okukhanya, okwethu i-ejensi yezindaba entsha indawo yakhelwe ngesizinda esimnyama namafonti akhanyayo… kunzima kakhulu ukufunda. Abanye abangani baveze ukuthi nayo ayihambelani ne-laptop yesinqumo esincane.
Iqiniso ukuthi, angifuni ukuheha izivakashi ngama-netbook noma ama-laptops amadala. Ngifuna ukunakwa ngabantu abanezinqumo ezinkulu. Angifuni ukuheha izinkampani ezingeke zithuthukise zisuke kwi-Internet Explorer 6. Angifuni nokuthi abantu bafunde isiza sami. Ngifuna bakubhekabheke futhi bazibuze ukuthi ngingabasiza yini noma cha… bese ngibachofoza kwifomu lewebhu.
Uma ungavumelani, awulona ithemba lami.
Nginamazinga aphezulu okubhampa. Kuhle lokho. Angifuni amanani aphansi e-bounce. Ngifuna ukuheha abasebenzisi abaningi bezinjini zokusesha, kepha ngifuna labo bantu bathole umbono osheshayo bese beshiya noma baxhume. Angingeni ngokuningiliziwe mayelana nalokho esikwenzela izinkampani… lokho kungenxa yokuthi sinentshisekelo kuzo zonke izinkampani ezinkulu. Inhloso yesiza sami ukungavumeli imikhondo eminingi nokukhuthaza bonke abanye ukuthi basibambe.
Le bhulogi, yeqiniso, yehlukile. Sizobuye sihlele kabusha le nyanga ukwenza ngcono ukufinyelela nokusatshalaliswa kwalesi siza, futhi nokuheha izivakashi eziningi. Inhloso yethu nezimali ezihlobene nayo kuyazuzisa lapho sifinyelela izivakashi eziningi. Sisazofaka ezinye izici zedizayini ezenzelwe abasebenzisi abanolwazi oluningi, kepha asifuni ukukhawulela izithameli zethu.
Ingabe isayithi lakho lithi "Gcina Ngaphandle"? Kulungile!
Ukumaketha okuku-inthanethi akuhlali kufinyelela abantu abaningi ngangokunokwenzeka, kwesinye isikhathi kumayelana nokudumaza izethameli ezingezona. Kungakho bengilokhu ngiphikisana nokusebenzisa amasistimu afana ne-Digg kumasayithi ezinkampani. Izikhathi eziningi bamane bangcwabe isiza bese babangela izingqinamba zobuchwepheshe ngaphandle kokungeza isivakashi esisodwa esifanele.
Kunezinto ezithile ongazenza ukuheha nokuphazamisa izethameli kusayithi lakho lebhizinisi noma kubhulogi. Ungesabi ukwephula imithetho.
Jul 27, 2010 ku-11: 46 AM
Yilokhu engikuthandayo ngezwe eliku-inthanethi nezentengiso, imithetho kuphela ukuthi ayikho imithetho! Inqobo nje uma izinhloso zibekiwe, inqubekela phambili iyalandelwa futhi imiphumela iba mihle, yini enye ebalulekile?
Doug, engikuhloniphayo ngawe ukungasabi kwakho ukuma futhi unikeze umbono wakho. Kwenza abantu bacabange kakhudlwana, futhi leyo yinhlansi engcono kakhulu yobuciko obuyimpumelelo umuntu angayicela.
Jul 27, 2010 ngo-3: 27 PM
Ngiyabonga Harrison - uqinisile. Yigoli elibalulekile.